Kanaung Font Converter
မူရင်း ဖောင့်စာလုံးရွေးရန် WinInnwa M-Myanmar1 Zawgyi-One BurmeseSpellingBook NLD1 Myanmar3 Ayar Kannaka
ပြောင်းလိုသော ဖောင့်စာလုံးရွေးရန် Myanmar3 Zawgyi-One Ayar
Zero-Width-Space အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများအား အော်တိုစစ်ရန် ရိုးရိုးစာသား အကြံပြုထားဖူးသော စကားလုံးများအား သုံးရန်
မပြောင်းလိုသော စကားလုံးများအား အကြံပြုပေးရန်
မပြောင်းလိုသော အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများအား ကော်မာခံ၍ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ အက္ခရာ ၄ လုံးအောက် နည်းသော စကားလုံးဖြစ်လျှင် အနည်းဆုံး စကားလုံး ၂ လုံးတွဲ၍ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
ဥပမာ။ ။ "I love you." ဆိုသော စာကြောင်းမှ "you" ဆိုသော စကားလုံးအား မပြောင်းလိုလျှင် "love you." ဟု ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ အသေးစိတ် သိလိုလျှင် အကူအညီကို နှိပ်ပါ။
မပြောင်းလိုသော စကားလုံးများအား စာရင်းပေးရန်
Zero-Width-Space အမှန်ခြစ်ကွက်သည် စာပိုဒ်များအား ဖောင့်ပြောင်းရာတွင် Zero-Width-Space ထည့်သွင်း၍ စကားလုံး ခွဲခြားခြင်း ပြုလုပ်ပေးရန် ဖြစ်သည်။
ASCII ဖောင့်များမှ ပြောင်းလိုသောအခါ ရွေးချယ်စရာ အချို့ရှိပါသည်။ ( အမှန်ခြစ်ကွက် ၃ ခုနှင့် စာရိုက်သွင်းရန် အကွက်တစ်ခု)
ပထမ အမှန်ခြစ်ကွက် (အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများအား အော်တိုစစ်ရန်) သည် အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာစာရောရေးထားသော စာပိုဒ်များအား ပြောင်းသောအခါ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးနှင့် မြန်မာ စကားလုံးများအား ခွဲခြား စစ်ဆေးပေးသည်။
ဒုတိယ အမှန်ခြစ်ကွက် ( ရိုးရိုးစာသား) သည် မူလကတည်းက အမှန်ခြစ်ထားသည်။ html/xml များပါဝင်သော စာပိုဒ်များအား ပြောင်းလိုသောအခါ အမှန်ခြစ်အား ဖြုတ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ သို့သော် အမှန်ခြစ်အား ဖြုတ်ထားပါက ရိုးရိုးစာသားအား ပြောင်းသော အချိန်ထက် ပိုမို ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
တတိယ အမှန်ခြစ်ကွက် ( အကြံပြုထားဖူးသော စကားလုံးများအား သုံးရန်) သည် အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာစာတို့အား ခွဲခြား စစ်ဆေးသည့်အခါ သုံးစွဲသူများမှ အကြံပြုထားဖူးသော စကားလုံးစာရင်း အဘိဓာန်အား အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများမှ အကြံပြုထားဖူးသော စကားလုံးစာရင်း အဘိဓာန်ဆိုသည်မှာ အောက်ဘက်ရှိ စာရိုက်သွင်းရန် အကွက်တွင် ရိုက်သွင်း အကြံပြုထားဖူးသော စကားလုံးများအား ဆာဗာပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မပြောင်းလိုသော စကားလုံးများအား စာရင်းပေးရန် (စာရိုက်သွင်းရန် အကွက်) သည် အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများအား အကြံပြု စာရင်းပေးရန် ဖြစ်သည်။ စာရင်းပေးထားသော စကားလုံးများအား ထည့်သွင်း ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာများအား မြန်မာ အက္ခရာတို့ဖြင့် လဲလှယ် အစားထိုးရာတွင် အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများအား ဖယ်ထားပေးပါမည်။ ထို့ကြောင့် ASCII ဖောင့်များမှ ပြောင်းသောအခါ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများမှာ မူလအတိုင်း ကျန်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရေးကြီး မှတ်သားရန်အချက်တစ်ခုမှာ။ ။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသည် အက္ခရာ ၄ လုံး အောက် လျှော့နည်းပါက စကားလုံးတစ်လုံးတည်း ထည့်သွင်းမည့်အစား စကားလုံးတွဲ၍ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။
This is the fastest and most realiable converter ever for Burmese Fonts encodings.
Name: Myanmar Font Converter
Web URI: http://converter.myanmapress.com
Description: Use to convert ASCII and Unicode fonts vice verse.
Author: Kanaung Development Group
Author URI: https://github.com/kanaung/converter/
For detail instructions, use Help tab section
Copyright © 2014 | Ayar Myanmar Unicode Group